Vhidhiyo chat roulette - kutaurirana pasina miganhu 24/7
Vhidhiyo yekutaura roulette inzvimboyemaharayaunokwanisakutaura nyorenevasikananevakomana venzvimbo dzakasiyana kubva ku197 nyika dzepasi.Kuti uwane interlocutor, haufanirwe kusiya imba yako inotonhorera, zvakakwana kuti uwane mukana weInternet.
WebhusaitiyeChatrouletteinoburitsa pfungwa yekutanga yebasa remazuva ano rehushamwari nekutaurirana pasina miganhu yenzvimbo kana yezera.Unogona kutora chikamu muhurukuro chero nguva yezuva uye 100% kuwana munhu anovaraidza.
Nheyo yekushanda kweiyo online vhidhiyo chat roulette
Kutaurirana nevamwe vashandisi kunoitika zvachose pane yedu server.Kugona kwayo kunokwanisa kumira kuyerera kukuru kwevashanyi.Vhidhiyo yekutaura rouletteinoitwaonline, pasinakunyoreswakwenguva refuuyeyemaharazvachose .Iyo sisitimu inoratidza vhidhiyo yemushandisi uye inopa mukana kune webcam.
Iyo interlocutor inosarudzwa otomatiki, iyi imhando ye "Russian roulette".Kuti uite izvi, nzira yenhamba dzisina kujairika inoshandiswa, mushure mezvo kubatana kunosimbiswa zvakananga.Iyi tekinoroji haishandisi maseva sevamiriri.Kutenda kune izvi, hazvibviri kuwana nzvimbo yevaenzive online chat roulette.Iyo sevhisi inoshandisa kutsvaga zvisina tsarukano, inopa kutaurirana, uye haidi kurodha madhiraivha.
Imwezve "pamwe" yehurongwa ndeyekuti haufanire kuisa chero ruzivo rwemunhu, haufanire kuratidza "e-mail" kana kuuya ne "nickname", chiitiko chose chinoitika mushure mekudzvanya 2 pa. mabhatani ebasa.
Sei uchida vhidhiyo yekutaura roulette pasina kunyoresa?
Wana shamwari/vanozivana navo.Kushanda, kudzidza, kunyara kwebhanari hazvikubvumiri kuwana shamwari chaiyo?Vhidhiyo chat roulettemukana wekutanga kutauriranazvine hushamwari nevasikanakana vakomana pasina kuendanekunyoresa.Iyi sarudzo yekutsvaga shamwari inonyanya kushanda, nokuti.inokutendera kuti urege kudzikamisa denderedzwa chete kune vaunoshanda navo, vaunodzidza navo kana vaunoziva, kune zviuru zvevanoda kukwikwidza pamberi pako.Mune isingazivikanwe mode, zviri nyore "kuvhura", kukunda kunyara kunogona uye kuwana munhu anonyatso kunzwisisa iwe.
Wana wako "soulmate".Vhidhiyo yekutaura rouletteinobvumidza iwe kwete chete kushamwaridzanaonlinenemusikanaakanakakanamurume akashinga, asiwo kuvaziva panguva yekukurukurirana kusingagumi.Mukana wakanaka kwazvo wekudzidza wawakasarudza kubva pa "A" kusvika "Z" pamberi pemusangano ungangove usina Indaneti.Mune rhythm yemazuva ano yehupenyu, maitiro chaiwo ekutsvaga missus anokurumidza uye ari nyore kupfuura munyika chaiyo.Imwe bhonasi yekuwedzera - "zuva" rinogona kuvhiringwa chero nguva, kutaura zvakanaka kumukomana / musikana anofarira zvachose.
Ziva vatorwa.Kukurukurirana kwevhidhiyoibasarisina zvirambidzo panegeography yekukurukurirana, unogona kutauramaharauye mune imwe nyaya yemasekonzi nevagari vemunyika dzakavakidzana kana dzekunze.Uye zvakare, uyu mukana wakanaka wekudzidza mitauro yekune dzimwe nyika kana kukwenenzvera hunyanzvi hwako hwekutaura, usingashandisi mabhuku ekuverenga kana Internet, asi zvakananga kubva kumutauri.Mukuwedzera, kana uchida, iwe unogona kuenda rwendo, uchiziva kuti mune imwe nyika yausingazivi kune mumwe munhu anosangana uye kuita nzendo dzisingakanganwiki.
Chatroulettendeye yemahara zvachoseonline vhidhiyo chatyenguva refu kana pfupi yekuzivana, yakakomba kana kureruka kutamba nevakomana kanavasikana.Inoshandiswawo kana iwe uchingoda kutaura nemumwe munhu uye kuwana rutsigiro rwetsika.Zvinowanzova nyore kugadzirisa mamiriro ezvinhu akaoma nerubatsiro rwemutorwa pane hama.Kusazivikanwa ivimbiso yekuti unogona kukurukura nyaya "inopisa" pasina hanya nekunyara.
Maitiro ekutanga vhidhiyo chat pasina kunyoresa?
PC, piritsi kana zvimwe zvishandiso zvaunogona kubatanidza webcam;
nguva yemahara yeonline vhidhiyo chatnevakomana,vasikana.
Chinhu chakakosha nuance.Unogona kutaura usina kamera uchishandisa "Mharidzo nyora pano" ndima.
Iyo sevhisi marongero ane intuitive, kunyangwe kune vanotanga vasati vatora chikamu mukunakidza chaiko kufambidzana.Iyo sisitimu ichasarudza vavhoti kune inonakidza yekutandara mumasekonzi 2-3.
Yemahara online vhidhiyo chatinotangapasina kunyoreswa, mushure memushanyi:
enda kuneChatroulettewebhusaiti ;
tinya pa "Enable webcam" bhatani;
achapindura chikumbiro "Gonesa flash player" zvakanaka;
tinya pakanzi "Tanga kutsvaga shamwari".
Kutepfenyura kwevanoda kutaurirana kunotanga.Iwe unogona kumira pakutanga kwavo kana "flip through" nekudzvanya pa "inotevera".Chimiro chakadaro hachikumanikidzi kuti ushamwaridzane nemunhu asingadiwe interlocutor, sarudzo yekupedzisira inoenderana newe chete.
Iyo Chatroulette sevhisi ndeyaani?
anoda kujairana asi anotya/anonyara kuzviita "kurarama";
akabatikana zvakanyanya, haana nguva yemahara yekuwana shamwari / mudiwa;
inofarira nzira yemazuva ano, yakasiyana-siyana yekukurukurirana;
kutsvaga nzira isiri-yediki yekushandisa yemahara "maminetsi".
Uye zvakare kune vanhu veese mazera, mabasa, zvitendero uye maonero ehupenyu.Iko hakuna "kutonga kwechiso" kana zvipfeko zvinosungirwa zvekubuda.Unosarudza kutaurirana uchishandisa kamera nemakrofoni kana kutaura.
Zvakanakira zveChatroulette sevhisi
Kushandisa iyi fomati yekukurukurirana kwakanakira uye kwakachengeteka.Izvo zvakakosha zveroulette vhidhiyo chat ndeyeonlinemode, shandisamaharauye isina muganho nhamba yevashanyi, unogona kutauranevasikanakana vakomana.
100% "kuvanzika".Iko hakuna kunyoreswa pano, hapana ruzivo ruchadikanwa kubva kwauri, kunyangwe yekutanga nyora zita kana e-mail.
Kukurukurirana 24/7.Kupinda kune saiti kunowanikwa chero nguva yezuva, zvisinei nepakati pevhiki kana kupera kwevhiki, maawa ekushanda kana mazororo.
Kufambidzana pasina miganhu.Zvepamhepovhidhiyo chat roulette, murume kana mukadzi wevashanyi, nzvimbo yavo, sarudzoyemusikanakanamukomanawekutaura newe haina kukosha.
Kureruka kwekushandisa.Iko hakuna chikonzero chekudhawunirodha uye kuisa yakakosha software, zvese zvinoitika "kurarama", muvhidhiyo kutepfenyura modhi.
Kukurumidza kusarudzwa kwevanoda.Iyo system algorithm inomisikidzwa nenzira yekuratidza vanhu vatsva vanoda kutaura pachiratidziro chako mumasekonzi mashoma.
Mushandisi anovhura nyika yese, nekuda kwechidzidzo chekuti munhu haadi kuchengetedza mari yekufamba kwenguva yakareba, "cheka" nguva pakati pebasa kana kudzidza.Unogona kutaura nevamiriri venyika dzakasiyana pano uye ikozvino.
wedzera horizons yako uye geography yevanozivana navo;
kuwedzera kuzviremekedza uye kubvisa matambudziko mukukurukurirana;
tsvaga "multi-format" interlocutors yehurukuro pane chero musoro;
iwe uchakwanisa "kutarisira" munhu kune hukama hwerudo;
shandisa nguva yako yekuzorora nekubatsirwa, kunonakidza, kusajairika uye kunonakidza.
Tangavhidhiyo yekutaura roulettenevakomana kanavasikanavechero basa uye zera 100%yemaharauyepasinakunyoreswakusingakoshiizvozvi.
Chii chinonzi chatroulette?Gumiguru 13, 2022, 20:41
Mumakore achangopfuura, iyo inonzi roulette chats yakawana mukurumbira mukuru paInternet.Iyi imhando ye online dating service, asi mutsauko pakati pechat roulette uye yenguva dzose yekufambidzana saiti ndeyekuti pano munhu haasarudze anopindira.Iyo sisitimu pachayo inosarudza inopindirana zvichienderana neayo mushandisi kuenderana algorithms.Mushandisi pachake anogona kusarudza chete yaidiwa murume uye zera remangwana interlocutor.
Kune zvakare hurukuro dzevhidhiyo dzeveruzhinji.roulette vhidhiyo yekutaura nhepfenyuro inowanikwa kune wese munhu ari pasaiti http://rt.ruletka-888.com/.Pane kusarudzwa kukuru kwevakasiyana-siyana vekutaurirana.Panguva ino, vanhu vanopfuura 1000 vakanyoreswa panzvimbo iyi, avo vachafara kusangana neshamwari itsva.Nekureruka kwevashandisi, mukuwedzera kune yakajairwa chat, yevhidhiyo chat yakagadzirwawo kuitira kuti vanopindirana vaone mumwe nemumwe, uye kutaurirana kwainakidza uye kwakasununguka.
Chatroulette inoshanda sei?
Bhalisa pane saiti uye zadza ruzivo rwako
Tanga hurukuro yevhidhiyo uye mirira kuti sisitimu isarudze anopindirana kuti utaure naye.
Taura zvakanyanya sezvaunoda, uye kana uchida kutaura nemumwe munhu, wobva wadzvanya bhatani rekuti "rinotevera" uye sevhisi ichasarudza mumwe mudiwa wehurukuro.Izvi zvinogona kuitwa nhamba isingaperi yenguva.Dzimwe nguva interlocutors anodzokororwa, asi izvi zvinoitika kashoma.
Pakarepo mushure mekunyoresa, zvinokurudzirwa kurodha yakakosha mobile application.Izvo zviri nyore kupfuura iyo online vhezheni yesaiti, sezvo application yacho yakanyatso gadzirwa uye kuedzwa kushanda panharembozha.Uyezve, nerubatsiro rwenharembozha, unogona kugamuchira zviziviso kubva kune vanopindirana zvakananga pachiratidziro chefoni, saka haufanire kugara uchitaura uye kutevera zvigadziriso.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa ipapo kuti sevhisi iyi inowanikwa chete kune vagari vasvika zera re18.Kune vamwe vese, kuwana sevhisi kwakavharwa, sezvo inogona kunge iine zvisingadiwe.Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve mazwi ekushandiswa kwesevhisi uye mitemo yekuzvibata kwayo muchikamu che "matemu ekushandisa".Kukurukurirana kwakabudirira!
Vanodiwa vashanyi!Basa resaiti rinoda simba rakawanda, nguva uye zviwanikwa, saka kana iwe uchida purojekiti yedu uye uchida kuti irambe iripo, unogona kuita mupiro wako nenzira yemupiro mudiki.Iwe unogona kuita mupiro kune Sberbank kadhi: 4817760251202287Tichafara kune chero rubatsiro.Ndatenda!))
Yakanakisa Chatroulette online
Wakafinhwa here nekutaura pasocial network, asi hausati waedza chatroulette?Iwe unoda kuona mhenyu webcam uye kutaura nevanhu chaivo?Ipapo iwe zvechokwadi uchafarira nzira iyi yekukurukurirana kweInternet!
Ichi chishandiso chakanakira vasikana nevakomana vanofarira kunyarara kune makambani ane ruzha.Munzanga yemazuva ano, kune vanhu vazhinji vanogona kuitisa nhaurirano nevasingazive muhupenyu chaihwo, asi panguva imwe chete ivo vari kusangana zvinorwadza nekushaikwa kwekutaurirana uye chat roulette yakagadzirirwa kugadzirisa mamiriro ezvinhu aya.
Ukatarisa kubva kunze kune iyi vhidhiyo sosi, unonzwisisa kuti sei yainzi chat roulette (mazita akafanana: chat roulette, ru roulette, chat roulette 18, chat roulette, chat roulette Russian).Mushure mezvose, iyi yekuziva pamhepo inosanganisa zvinhu zviviri: chat uye yakakurumbira roulette mutambo.Kungofarirwa kwese kweiyi yakajairika online kufambidzana kuri muchokwadi chekuti iyi ihurukuro yevhidhiyo!Ndiko kuti, iwe unosangana neanongopindira interlocutor nekutarisa, uye kana iwe usingamudi, ingo dzvanya bhatani uye enda kune mumwe mutorwa.
Iyi hurukuro yevhidhiyo iri kuwedzera mukurumbira muEurope (England, Germany, France, Italy, Spain, Switzerland, etc.), muU.SA (America), Mexico, China, uyewo munyika dzeCIS (Russia, Ukraine, Belarus) .Izvi hazvishamise, nekuti iyi mhando yekutaura roulette inonakidza kwazvo.
Mamirioni evashandisi nhasi anoona nhaurirano dzechatroulette seyakanakisa uye muzviitiko zvakawanda ndiyo yakanakira kutaurirana fomati.Uye izvi zvinonyatsoratidza kuti kushandiswa nevanhu vezera rakasiyana nzira dzemazuvano dzeInternet dzekufambidzana uye kusangana munguva chaiyo inzira yakanaka kune masocial network.
Wirt chat roulette - 1000 vasikana nevakomana vanoda kutaura newe
Izvo hazvina basa kuti munhu anongoda kunakidza uye kunakidza kukurukura kana kutsvaga mudiwa wehukama hwechokwadi uye hwakakomba - mu chat roulette nevasikana vechiRussia nevakomana, pamwe nevatorwa, munhu wese anogona kusangana neshamwari yakazvipira uye rudo. kwehupenyu hwose.
Vanhu vazhinji havakwanisi kungotaura mumugwagwa nemunhu wavanoda, uye kubasa vanofanira kuenderana nemufananidzo unogamuchirwa.Zvose izvi zvinhu zvinounganidza mu-subconscious uye zvinotungamirira kune chokwadi chokuti munhu anova nhapwa yekutya uye kusanzwisisana kwakawanda, nepo roulette inoonekwa seyo chete nzira yekubuda mumamiriro ezvinhu aya.
Saka chii chekuita mumamiriro ezvinhu akadaro?Nzira yekubvisa sei kusurukirwa uye kupi kuwana munhu wausingagoni kungonakidzwa nekukurukurirana, asiwo kutanga hukama hurefu?
Tichifunga nezve mikana isingaperi yemazuva ano nzira dzekutaurirana paInternet, hazvigoneke kukanganwa nezvemashanu asingarambike mabhenefiti evanoshandisa chat roulette:
Nyore uye nekukurumidza.Chat roulette saiti uye maapplication ari munyika akasununguka uye kazhinji haadi kunyoreswa.Ingo dzvanya bhatani rekuti "tanga", uye sisitimu inozozvisarudzira imwe shamwari yako;
Random vanozivana.Vamwe vanhu vari muvhidhiyo chat vanonyara kutora danho rekutanga, vachifunga kuti neiyi nzira vachaita sevanomanikidzwa.Apa hauzive wauchaitisa nhaurirano naani chaizvo.Kana iwe wakapinda muvhidhiyo chat, iwe uchaona munhu kune rumwe rutivi rwechidzitiro ari kutsvagawo shamwari uye akagadzirira zvakakwana kwete chete kutaura, asiwo kumisikidza kuonana nemuteereri anoshamisa;
Zviri nyore kuonana uye kutaura zvakanaka.Kana iwe uchinzwisisa kubva pamaminitsi ekutanga ekukurukurirana kuti interlocutor haafadzi, kana kuti akazvibata zvisina kufanira, saka pasina tsanangudzo kana kukumbira ruregerero, shandisa bhatani "rinotevera", uye iwe uchashandurwa kune muteereri mutsva;
Musangano unoitwa ne webcam.Mukutaura uku, pasina kurodha pasi, unogona kuona nekunzwa pakarepo mutauriri, uyo unoshanda zvakanyanya kupfuura kunyorerana pasocial network, uko vashandisi vanowanzotumira ruzivo rusingaenderane neicho chaicho panzvimbo yemufananidzo chaiwo.Kujairana newebhukamera kuri nyore;
Kubvisa kusurukirwa uye kufinhwa.Haasi munhu wose anogona kuudza hama kana shamwari pachena nezvematambudziko anorwadza.Muchat roulette stream haugone kungogovana pfungwa dzako neshamwari nyowani, asi zvakare tsvaga mweya wekuroorana naye ane misimboti yehupenyu humwe.
World Chatroulette - saiti isingazosiyi chero munhu asina hanya
Kazhinji vasikana nevakomana vanoda kuchinja mararamiro avo vanotanga kutsvaga vatsva vavanozivana navo mumasocial network, izvo zvisingawanzovapa mhedzisiro yavanoda.Zvichienzaniswa nechatroulette, zvakaoma chaizvo kuwana shamwari itsva ikoko, sezvo iwe usingakwanisi kuva nechokwadi nezvemumwe munhu.Yechipiri sarudzo iyo vanhu vanowanzofarira ndeye online kufambidzana nevakadzi nevarume chaivo, izvo zviri kuwedzera kufarirwa zuva rega rega.
Kuzivikanwa kweRussia mhenyu vhidhiyo chat iri kukura nekuda kweakawanda mabhenefiti ayo anoisiyanisa kubva kune chero imwe sarudzo.Iyi inoshamisa nzira yekuwana vanhu vatsva inokwezva vakomana nevasikana vanowedzera vane mamiriro ekunze anokatyamadza uye chinhu chekushamisika, chinokwenya tsinga zvinofadza uye chinowedzera zvinonhuwira kuhupenyu hwezuva nezuva.
Chinhu chinonyanya kufadza mune izvi zvese ndechekuti inokurumidza chat roulette ikozvino haingobatsiri vanhu kuti vafare uye vazivane, asi inobatsirawo kugadzira mhuri, zvisinei nekuti inganzwika seinopenga.Nekuda kweizvi, vashandisi vazhinji vasina kuroora vasingangowana nguva nemukana wekuwana mweya wavo wekuroora mukumhanya kwehupenyu hwazvino vanowana mufaro wavo.
Chatroulette mubrowser - kufambidzana uye kutaurirana mukudzvanya kumwe chete
Tekinoroji dzemazuva ano dziri kushandura nyika nekuvandudza marudzi ese ekutaurirana.Nhasi, nekuda kwechatroulette nevatorwa uye maRussia, vanhu vanogona kutaurirana pasina kusiya misha yavo uye kuwana vanhu vasingazive nekudzvanya kumwe chete.Iye zvino munhu wese anogona kutora mukana wenzvimbo iyo nhamba huru yevakomana nevasikana vari kutsvaga zviitiko zvitsva uye vanoda kushandisa zvine hungwaru kupedza nguva neshamwari itsva.
Uye zvakare, inonakidza roulette muYandex browser inzira yemazuva ano yekutsvaga vanhu vatsva, uko zvese zvinosarudzwa nemukana.Kana iwe wakaneta nemaitiro kana kusurukirwa, saka inguva yekuti iwe unyure mumhepo inonakidza yekutamba nekutamba roulette nevasingazive.Nditendei, zvakaoma kuwana imwe inonakidza, uye panguva imwechete yakachengeteka, nzira yekukurukura nemunhu chaiye.
Kunyangwe iwe usati wamboedza kutaura nevasikana vakanaka, iwe unogona kunge wakanzwa nezve nzira iri nyore uye yakakurumbira yekusangana nevanhu vatsva, kuita shamwari uye kunyange kuvaka hukama hwerudo.Edza chatroulette kuburikidza nekamera uye uone kuti zviri nyore sei kuchinja hupenyu hwako hwezuva nezuva uye kuva munhu anofara.
Sei Russian chat roulette yakakurumbira zvakadaro?
Chokwadi ndechekuti chatroulette inoita kuti uve nenguva yakanaka.Hezvino izvo web chat roulette inopa kune iwe kutarisa pasina kunyoresa uye zvachose mahara:
Kana iwe usingazivi maitiro ekuunganidza hushingi hwekusangana nemunhurume akasiyana muhupenyu hwezuva nezuva, une mukana wakasarudzika wekutora mukana wekungojairana naye mune ino vhidhiyo chat.
Chatroulette ichakubatsira iwe kutanga yakapfava, asi panguva imwe chete inonakidza nhaurirano neasina kupindira interlocutor.
Mutambo wenguva dzose wekutaura roulette, kana iwe uchangogara uye flip kuburikidza neasina kupindira interlocutors uye tanga kutaurirana nemunhu waunoda.
Pano iwe unogona kugovera zvaunofarira, pamwe nekufarira interlocutor nekugona kwako kuridza gitare, kuimba, nezvimwe.
Zvisina kujairika, asi ndezvechokwadi: vamwe vanotokwanisa kuita mazano mune chatroulette!- yekufambidzana nevasikana pasina kunyoresa.
Ehe, runyorwa urwu runogona kuenderera nekusingaperi, nekuti fungidziro dzevanhu hadziperi :)
Chatroulette yakaita kuti zvikwanisike kuti vanhu vataure munguva chaiyo nevasingazivi.Vanhu vazhinji havasati vaziva nezveizvi, nekuti kwatova neanoroga akati wandei ekutaura roulette (Ru roulette, Russian chat roulette, nezvimwewo).
KuMit chat - yekutanga vhidhiyo yekutaura roulette yekufambidzana nevasikana online
Nyika iri kuchinja nekukurumidza kupfuura yatinayo nguva yekuzviona.Mabasa matsva anooneka uye ekare anopinda mune zvakapfuura, Indaneti inogona kutsiva chikoro, yunivhesiti kana zvidzidzo zvedzidzo, uye masocial network uye vatumwa vanokurumidza kuve chikamu chakakosha chehupenyu hweanenge chero munhu anhasi.
Asi pane chimwe chinhu mune ichi chamupupuri chakaramba chisina kuchinjwa kwemireniyumu.Ichi ndicho chidikanwi chemumwe nemumwe wedu mukutaurirana, kutsvaga shamwari dzechokwadi uye mweya wekuroorana naye.Magumo anoramba akafanana, nzira chete dzekuzviita nadzo dzinoshanduka.
Imwe yezvishandiso izvi ndeye online vhidhiyo chats.Yave iri yakanyanya kufarirwa fomati kweanopfuura makore gumi ikozvino.Kunyangwe zvichifanira kutaurwa kuti haasi ese emazuva ano ewebhu chats anosangana nezviyero zvazvino uye zvinodiwa.Machatroulette mazhinji haagone kuzvirumbidza nemwero yakanaka, vateereri vanoshingaira, kana nyore kushandisa.Zvisinei, kuchine misiyano.Imwe yacho ndeyeRussia vhidhiyo chat CooMeet.Iyi ipuratifomu yakakunakira yekukurukurirana nevakomana, kufambidzana uye kutsvaga wekuroora wemweya.Uye yakanakisa mwero uye basa risingaite rinoita iyi vhidhiyo kutaura nevasikana imwe yeakanakisa erudzi rwayo.
CooMeet Premium vhidhiyo chat ibasa rinogara richivandudzwa uye kuvandudzwa kuti ive rakanakisa pakati pewebhu webcam chats.Uye izvi, hongu, zvinoda mari.Isu tinogona kurasa saiti nemashambadziro uye pop-up mabhena panguva yekufona kuti tiite purofiti kubva mairi.Asi zvingave zvisina kururama maererano nevashandisi.
Naizvozvo, CooMeet Premium yakaunzwa, iyo nemutengo diki inobvumidza iwe kunakidzwa ese mabhenefiti uye maficha esaiti.Izvi zvakaita kuti zvikwanise kugadzira sevhisi yemhando yepamusoro yechokwadi:
yepamusoro-soro yekuchengeteka uye kuvanzika;
kunyatsoita mwero 24/7;
kusavapo zvachose kwebhoti uye fakes pane saiti;
nguva dzose yakanakisa vhidhiyo uye ruzha rwemhando;
maturusi akakodzera ekutsvaga akakodzera interlocutors.
Zvakanakisa pane zvese, unogona kushandisa CooMeet mahara panguva yekuyedza.Muchiitiko ichi, iwe uchave nekuwana kune ese mabasa uye mikana yevhidhiyo kutaura nevasingazive.Uye nechekare pakupera kwenguva yemahara, iwe pachako unosarudza kutenga premium yekuwana kana kwete.Asi iwe haugone kana kukahadzika - iwe uchazvida!
Zvikanganiso paunenge uchitsvaga chat roulette KuMit
Chikanganiso chikuru kusangwarira pakupinda zita reCooMeet chatroulette.Semuenzaniso, kune akadaro typos: comeet, coomet, coo meet, coomeets, coomee, coomate, coommet, coomeeet, coomet, coomet, comet chat nezvimwe zvakadaro.Ngozi ndeipi?
Kazhinji, iwe haungangowana saiti mukutsvaga, asi Google inonzwisisa zvauri kureva uye nekukupa iyo chaiyo link.Asi mune yakaipisisa, iwe unomhanyisa njodzi yekusvika kune saiti yevatsotsi vanonyanya kushandisa zita rakafanana neCooMeet online.Uye apa ndipo panogona kutanga matambudziko akakomba.
Mazano!Tarisa iyo CooMeet webhusaiti kero chaizvo zviperengo netsamba.Saizvozvo, tarisa nekuchenjerera iyo yepamutemo CooMeet online chat app mune iOS kana Android app zvitoro.
Rangarira kuti CooMeet haingori yeRussia chat roulette.Chikuva chedu chinoshanda munyika zhinji huru dzepasi.Iwe unogona kusarudza nyika yako pane saiti pazasi - iyo saiti ichakurumidza kuratidzwa mumutauro wakakodzera kuti zvikuitire nyore.
Ungatanga sei kushandisa vhidhiyo chat?
Zvese zviri nyore kwazvo:
1. Unoenda kuwebhusaiti yeCooMeet wobaya bhatani kuti utange chatroulette.
3. Ipa saiti mukana kune yako webcam nemakrofoni, uye wobva watanga kutaura nevashandisi vasina kurongeka.
Kana iri nguva yako yekutanga pane saiti, iyo sisitimu inokupa iwe kunyoresa uye kuwana maminetsi emahara ekutaura nevasikana mu chat roulette.Tinokupa zano kuti utore mukana weiyi bhonasi yakanaka.
Nenzira, muzvirongwa zvekutaura iwe unogona kusarudza kuti unoda kutaura sei - kuburikidza nevhidhiyo kana mameseji chat.Mu "Message" block, unogona zvakare kubata tekinoroji rutsigiro uye kuwana rubatsiro nebasa rako.
Kana kutaurirana nemumwe munhu kukasawedzera, unogona kushandura kune inotevera nekungodzvanya kumwe chete.Nokudaro, manheru mamwe chete iwe unogona kusangana nevanhu vakawanda vanofarira, kuwana shamwari dzakanaka uye kunyange mweya wekuroorana naye.Sangana, taura pane chero chinyorwa, ronga musangano muhupenyu chaihwo uye tanga hukama hutsva pasina kunonoka!
Mazano ekushandisa Random Vhidhiyo Chat
Iva neruremekedzo uye nemoyo murefu, usave nehutsinye kune vanokubvunza uye uzvibate nemazvo kwavari.Iyi ndiyo mitemo inonyanya kukosha yekukurukurirana kwete chete muIndaneti chatroulette, asi kazhinji paInternet.Asi pane matipi mashoma anobatsira akanyanya kutaurirana mu chatroulette online:
1. Seta webcam yako uye mwenje.Ita shuwa kuti mufananidzo kubva kamera yako wakajeka, uye kuti wakanangidzirwa kwauri, uye kwete patafura kana kumwewo.
2. Chengetedza kunaka kwezwi.Maikorofoni yakaipa inogona kukanganisa kutaurirana kwese.Kana ruzha runobva kwairi rwuri rwehutano husina kunaka, zviri nani kutenga imwe itsva.Kunyange bhajeti yemuenzaniso ichaita.
3. Taura vashandisi vanotyora mitemo yeCooMeet.Tinoedza kutarisa maitiro asingagamuchirwi uye kurambidza vanotyora panguva.Asi nerubatsiro rwako, maitiro ekuenzanisa anokurumidza uye anoshanda zvakanyanya.
4. Usati watanga kutaurirana, isa zvinhu zvakarongeka zvakakupoteredza - nenzira iyi iwe uchataridzika zvakanaka uye wakarongeka mumaziso emutauriri.Pedza maminitsi mashanu kuchenesa - haungazvidembi.
5. Panguva yekukurukurirana, edza kutarisa kwete pahwindo chete, asiwo pa webcam.Saka interlocutor ichava nemafungiro ekuti uri kutarisa ziso-ne-ziso.Izvi zvinobatsira kuita kuonana kuri nani.
Uye zvakanyanya kukosha, shandisa iyo CooMeet chatrandom nekunakidzwa, taurirana, tsvaga vanhu vanofarira uye ugare uine tariro.Uyu ndiwo mutemo mukuru wekubudirira mune chero chatroulette!
Chii chinonzi chatroulette?
Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve mashandiro anoita Chatroulette online nekutevera chinongedzo chiri pawebhusaiti.
Iyo chat ine yakanaka interface.Iyo database ine nhamba huru yevanyoreri.Asi haufaniri kutsvaka akarurama pakati pavo.Chat ichasarudza interlocutor iwe.Kukurukurirana kuburikidza nekamera kunokupa iwe mukana wekuswedera pedyo nemunhu asina kujairika.Rudzi rwechiitiko chauchawana, haufe wakakanganwa.Iwe unogona kutaurira interlocutor chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pako kana kudzidza zvakawanda pamusoro pake.Chatroulette inokupa iwe mukana wekubvisa makomba uye uve munhu akavhurika.
Iyo sevhisi yakapfuura nenguva dzekusimuka kunoshamisa uye kudonha kunosiririsa, uye ichiri kufarirwa zvakanyanya mumunda wayo.Rutivi rusina simba rwakanga rwuri kushaikwa kwe, chokwadi, kutonga kwevashandisi, nekuda kwekuti nguva nenguva mabhenefiti eanatomical "anodonha" muhurukuro pachinzvimbo chezviso zvevanopindirana, izvo zvisingadiwi nemunhu wese.
Kazhinji, anoshanda nharembozha mushandisi anotaurirana neshamwari dzake, mhuri, vaanoshanda navo kuburikidza nevanenge vashoma vatumwa pakarepo, akati wandei masocial network.network uye muenzi kune imwe foramu imwe chete, kunyangwe zvikaitika nekudikanwa.Kutaura nezvemaforamu, kana iwe wave kutenderedza maziso ako pane zano rekuti uzvishandise, rangarira zviwanikwa zvakakura zvine terabytes zvemukati zvemidhiya, nekuda kwekuti piracy yatora chirevo chakasiyana zvachose.
Kana iwe uchida kutsvaga shamwari nyowani kana kungonakidzwa, saka unofanirwa kushanyira Chat Roulette.Iyo yakasarudzika yeiyi chat iri muchokwadi chekuti iwe hausarudze wako interlocutor iwe pachako.Iyo sisitimu inosarudza mumwe wako wekuti iwe utaure naye.Izvi zvinokuchidzira kufarira, nekuti nguva dzese dzaunofanirwa kutaurirana nevanhu vatsva.Kukurukurirana uku kunofadza pfungwa uye kunomutsa kufarira.
Kukurukurirana muChat Roulette inobvumira vanhu kuti vakurumidze kugadzirisa mamiriro matsva, kuti vasunungure ivo pachavo.Kunyange vanonyara vanopindirana vanotanga kutaurirana vakasununguka nevasingazivi.Chat Roulette haina kufanana nemamwe machat rooms akawanda.Mushure mezvose, interlocutor yakasarudzwa inogona kuchinja zvakanyanya hupenyu hwako uye kukupa gungwa remanzwiro.Iyi hurukuro yevhidhiyo ndeyemahara.
Zvese zvaunoda kuti utaure mune iyi chat komputa uye yakakwirira-kumhanya internet.Vanhu chaivo vanotora chikamu muhurukuro, hapana kunyengera pano.Ndokusaka vatori vechikamu chekutaura vachigara vari mune tarisiro inofadza.Vese vanonyanya kunakidza vanozivana vanogara vachiitika nemukana, ndosaka vanhu vanosarudza ChatRoulette.Iwe unogona kukwanisa kuita shamwari itsva kana kuwana rudo rwako.
Iva nechokwadi chekuti kutaurirana muChat Roulette hakuzokusiye iwe usina hanya.Kana iwe wakaneta nehupenyu hwezuva nezuva uye uchida zviitiko zvitsva, saka Chatroulette ndeyako.
Nguva imwe neimwe isati yatanga kutaurirana, iwe unenge uri mukutarisira kunofadza kwerudzii rweinterlocutor yauchasangana nayo.Zvichida nhasi uchafanirwa kutaurirana nemusikana akanaka, uye mangwana chat ichakusarudzira iwe mukomana anofara anoda kufamba uye achakuudza zvakawanda zvitsva uye zvinonakidza zvinhu nezve nyika dziri kure.Chatroulette kununurwa kukuru kubva mukuora mwoyo uye kubhowekana.
Pangosvika interlocutor yako pahwindo, iwe unokanganwa kuti sarudzo yakaitwa nemukana.Nhambwe ichadzimwa, uye iwe uchatanga kutaurirana pahumwe wavelength.
Chatroulette ibasa rakasarudzika rekutaurirana kusingazivikanwe nevanhu pasirese.Iwe uchave nenhamba huru yevashandisi iwe yaunayo avo, sewe, vanoda kuita shamwari nyowani kana kungodurura mweya yavo kune mumwe munhu.Chishandiso chine dziviriro yakavimbika, kuitira kuti pasave nemumwe wevanopindirana achakwanisa kuwana yako data, nzvimbo kana rumwe ruzivo rwemunhu.
Munguva ichangopfuura, vanhu vakawanda vanosarudza kuzivana panzvimbo dzakakosha kana pasocial network.Asi dambudziko nemasevhisi akadaro nderekuti kunyoreswa kunodiwa ipapo, pamwe nekuiswa kwedata rako, senge nzvimbo, zera, dzidzo, zvichingodaro.Haasi wese mushandisi anoda kugovera ruzivo rwakadaro rwemunhu, nekuti dzimwe nguva zvinogona kukuvadza zvakanyanya.
Iyo Chatroulette app inopa introverts mukana wakasarudzika wekutsvaga shamwari uye kutaurirana pasina kutya kune yavo nzvimbo.Kukurukurirana uku kunotariswa nevatariri nguva dzese, saka kana paine hunhu husingafadzi hweanopindirana, unogona kunyunyuta nezvake uye maadmins anorambidza peji rake.
Kuti ushandise sevhisi, haufanirwe kana kuenda kuburikidza chero kunyoresa kana kumisa account yako.Ingo dzvanya "tanga" uye tanga kutsvaga interlocutors.Iyo chat inotaura chiRussia zvachose, asi inoshanda pasina matambudziko munyika dzese dzepasi.Iwe uchakwanisa kuwana shamwari dzinotaura mutauro wako uye wotanga kutaura nekukurumidza.
Interlocutors inogona kusarudzwa zvisina tsarukano.Kana kamwe-kamwe kutaurirana kwasvika pakukanganisa kana kuti iwe usingafarire munhu uyu, hapana tsananguro uye kunyarara kwakaoma kunodiwa.Ingopedza chat naye nekudzvanya "Next" bhatani.Pahurukuro, unogona kushandisa webcam nemakrofoni, kana kungotaura nemeseji.
Chat iyi haingori mutumwawo zvake.Kutenda kwaari, iwe uchakwanisa kusangana nevanhu vakasiyana uye vanoshamisa kubva kumativi ese enyika.Pano iwe haugone kunyora chete kana kutaura, asiwo kugovera matarenda ako uye hunyanzvi husina kujairika.Ingo penya kuburikidza nerondedzero yevashandisi varipo kudzamara wagumburwa pane chimwe chinhu chinonakidza uye chakakosha.
Kuita kuti chifananidzo chako chive chakajeka uye chisingakanganwike pakuona kwekutanga, funga pamusoro pezvinhu zvose zvisati zvaitika.Ratidza pamberi pevanopindirana nenzira isina kujairika, uchitora bhuku rako raunofarira, toyi yakapfava kana chipfuwo chete.Saka iwe unogona ipapo kuita fungidziro chaiyo, pamwe nekutsvaga vanhu chaivo vane pfungwa dzakafanana pakati pemirioni vashandisi.
Kugamuchirwa kuChatroulette!Yedu isingazivikanwe vhidhiyo yekutaura inoshanyirwa zuva nezuva nevanopfuura zviuru mazana maviri evashandisi.Pakati pavo, iwe zvechokwadi uchawana shamwari yekuda kwako.
Iyi ivhidhiyo sevhisi yekutumira mameseji, isingazivikanwe vhidhiyo chat kwaunogona kutaura nevanhu vanobva pasi rese uchishandisa webcam yako.Ingo dzvanya bhatani re "Tanga", uye iyo chat ichasarudza isina kurongeka interlocutor kwauri pakati pemazana ezviuru zvevashandisi.Iwe hauzoziva chero munhu mutauri wako, kana kwaanobva.Asi zvakanyanya kufadza - munogona kugara muchizivana mukati mekukurukurirana uye kuwana zvakajairika.Kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe usingafarire interlocutor, ingobaya "Next" uye enda kune inotevera.Hapana chikonzero chekuonekana, kukumbira ruregerero kana kupa tuzvikonzero.
Kana!Yedu yekutaura ndeye MAHARA, isingazivikanwe uye haidi kunyoresa kwakaoma.Iko hakuna chikonzero chekugadzira uye kuyeuka logins uye mapassword, simbisa email kana nhamba yefoni.
Isu tinoremekedza kusazivikanwa kwevashandisi vedu: mutauri wako haazive zita rako kana kwaunobva, kunze kwekunge wasarudza kugovera ruzivo urwu navo.Iwe haufanirwe kushivirira maitiro ekuzvidza kana anogumbura eanopindira.Kana akatyora mitemo yekutaura kwedu kana mutemo, iwe unogona kugara uchinyunyuta kune mutungamiriri, uyo anozofunga nezve kunyunyuta kwako uye kuvharira anotyora.
Chii chaunoda kuti utange kutaura?
Internet, webcam uye mafungiro akanaka.Asi kunyangwe iwe usina webcam, hazvina basa, maikorofoni ichakwana, kana iwe unogona kushandisa chinyorwa chekutaura pahwindo kurudyi.Nekudaro, rangarira kuti vanhu vanouya kuhurukuro yevhidhiyo kunyanya kuti vaone anopindirana, saka kamera haizove yakanyanyisa.
Ndiani achandibatanidza naye?
Pano iwe uchafanirwa kuvimba nekuda kweHumambo Hwake Chance.Kana iwe usingade imwe interlocutor, unogona kugara uchienda kune inotevera.Chatroulette ndiyo hombe yevhidhiyo chat iyo vashandisi vanotaura chiRussian, saka haufanirwe kurangarira mitsara kubva mubhuku rezvirevo reChirungu - vanokunzwisisa pano!
Nzira yekuita sei shamwari mune chat?
Zviri nyore sepai!Tanga chat nekudzvanya bhatani rekuti "Tanga", nyemwerera uye uti "Hi!".Usamirire iyo yekutanga kubva kune interlocutor, iratidze kutanga.Tose tinonyara kutanga kurukurirano, asi tatora danho rokutanga, tinonzwisisa kuti takanga tichitya chose pasina.Rangarira: munhu wese akaenzana mukutaura.Vese vashandisi vedu vari pano nekuda kwechinangwa chakafanana newe - kupedza maawa mashoma, kusangana nevanhu vanofarira uye kuwana chikamu chekunaka.Rombo rakanaka mukukurukurirana uye kuzivana kwakanaka!
Chatroulette KuMit - kusangana nevasikana pawebhucam
Uri kutsvaga nzira yekukurumidza yekusangana nemusikana akangwara uye akanaka?Webhu yekutaura roulette CooMeet (chiRungu vhezheni yeCooMeet) inokutendera iwe kuti utaure nevanhukadzi kubva kunyika dzakasiyana pasina kusiya imba yako.Kubatana kwepakarepo, yemhando yepamusoro-tsanangudzo yevhidhiyo kufona, hapana kushushikana uye chete vakanyanya interlocutors vanozogara vachisangana newe nekunyemwerera.
Isu tinoziva kukosha kwenguva nhasi: isu tinogara tichimanikidzwa kuisa pamberi, kuchengetedza uye nekumhanyisa, uye isu hatisati tine nguva yekuita zvese zvatakaronga.Mumhirizhonga iyi, kufambidzana uye hukama zvinowanzotora kumashure.Webhusaiti yepamutemo KuMit inovimbisa kutaurirana kwemhando yepamusoro chete nevasikana vanovimbwa - misangano yepamhepo, shamwari itsva uye manzwiro akanaka.
Kungodzvanya kamwe chete - uye yedu yakangwara yekusarudza sisitimu ichakubatanidza iwe neimwe yezviuru zvevasingazive vanoyevedza.Iva nechokwadi chekuti vasikana vese vakauya pano kuzosangana, kutaura uye kuvaka hukama.Hapana sevhisi yemahara inogona kupa yakafanana yepamusoro sevhisi seKuMit Chat:
kuenzanisa nemaoko kwemusikana wega wega akanyoreswa;
kukurumidza kugadzirisa kukakavara kupi zvako;
zvirango zvakanaka zvekutyora kwega kwega kwemitemo yechatroulette;
kuenderera mberi nekuvandudzwa kwekushanda kwesaiti.
Yakanakisa Alternative kune Omegle uye ChatRoulette
Wese munhu aifarira online roulettes zvimwe anorangarira chats idzo dzakamira pamabviro ekurukurirano isina kujairika.Aya aive Omegle uye ChatRulet, iyo yakaonekwa kumashure muna 2022.Wokutanga akauya kwatiri kubva kunze kwenyika, wechipiri - brainchild yechikoro chechikoro cheRussia Andrei Ternovsky.
Ese ari maviri ewebhu chats aive akavakirwa pamusimboti mumwechete: kutaurirana nevasina kurongeka vanobva pasirese.Uye kunyangwe Omegle aive nemusoro wekutanga kwemwedzi yakati wandei, yaive ChatRoulette yakatonga roost kwenguva yakareba.Nekudaro, zvese zviri zviviri chat-randoms zvakazotarisana ne "chirwere" chimwe, icho chichiri dambudziko uye chinodzinga vazhinji kubva pakuchishandisa.
Izvi, zvechokwadi, ndezvezvinhu zvisina kufanira.Munyika yakanaka, vanhu vakanaka uye vane hushamwari vanoda kusvika pakuzivana, kutaurirana, uye kupana hunhu hwakanaka vanofanira kupinda vhidhiyo roulette.Saizvozvo:
kazhinji iwe unosangana nevaratidziri vanoda kuratidza hunhu hwavo hwemuviri kune chero munhu anopindirana;
musikana akanaka angave mumiriri webasa rekare rinopa mabasa epedyo;
iyo inotevera yekubatanidza inokupa iwe mukana wekunakidzwa nemufananidzo wakamira kana vhidhiyo ine zvekushambadzira zvemukati.Hongu, haugone kuramba PR vanhu fungidziro.
Zvino zvakava pachena kuti imwe nzira yakakodzera yaidiwa - kungotaura kwevhidhiyo, kupinda kwausingazonetsekane kuti ndiani achange ari kune rumwe rutivi rwechidzitiro.Uye kumberi pakati peiyo yakagadziridzwa vhidhiyo chats ndeye KuMit.
Yakanga iri kuenzanisa kwevatori vechikamu uye matanho akakodzera akatorwa pakuputsika kwega kwega kwakava mhinduro yedambudziko rinorwadza remabasa akafanana.Kubva pakutanga, isu taiziva zvakajeka kuti hazvigoneke kuverenga pane yakazara otomatiki yeiyi maitiro - isu tinoda yemhando yepamusoro sevhisi yevanhu kuitira kuti vashandisi vanzwisise zvakanakira uye mabhenefiti esaiti yavanoshandisa.Uye kuedza kwacho kwakabatsira.
Nhasi - KuMit ndeimwe yemhando yepamusoro uye yakachengeteka isina kurongeka pawebhu chats.Uye chero munhu anogona kusimbisa izvi.Ingobaya "Tanga Kutsvaga" uye edza online roulette nevasikana.
The yakanakisisa Russian vasikana paIndaneti
Kuwana rudo nekuvaka hukama zvave nyore kubva pakatanga masevhisi ekupfimbana pamhepo.Uye chatroulette chave chishandiso chikuru kune izvi zvinangwa, kujoinha masocial network uye kufambidzana masaiti.Asi kusiyana neaviri ekupedzisira, iri mukukurukurirana kwevhidhiyo kwaunogona kuona maziso eanokwezva anopindirana, kunyemwerera kwake uye kunzwa manzwiro asingatsananguriki kubva padhuze kunyangwe ari chinhambwe chemazana emakiromita.
Uchiri mukukahadzika?Batanidza mahara uye tanga kutaura nevasikana mune yedu isina kujairika vhidhiyo chat izvozvi pasina kunyoresa uye kuzadza chimiro.Iwe unongoda webcam kuti utange KuMit vhidhiyo chat.Uye kana kamwe kamwe interlocutor isiri yekuravira kwako - chinja kune mutorwa mutsva nekudzvanya bhatani rimwe.Vasikana vanobva kumativi ose enyika vakatokumirira iwe!
Maitiro ekupindira mune yemumwe munhu chat-roulette yemapranks
Mhoro shamwari inodiwa, nhasi ini ndichakuudza chimwe chakavanzika chidiki icho vazhinjichatroulette prankersvanovanza , uye mumwe munhu anobvunza ichi chakavanzika vashoma zviuru subs(vanyoreri),asi ndakasarudza kugovera iyi yakakosha ruzivo mahara kunyanya iwe.
Ndinoda kukutsanangurira iwe pakarepo:Muchokwadi, isu hatizove nekubira, kwete kwete!hausi kukurumidza kusiya peji, asi verenga zvakanyatsonaka, isu hatisi kuzobira, asi tinotumira vaviri vanopindirana kune mumwe nemumwe.Kutanga iwe unoda kugadzirira
Izvi zvinogona kuitwa, hongu, neimwe nzira, asi ini ndichairatidza ndichishandisa muenzanisoweOBS - Studio
Voice mita (yemahara)VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:Voice meter virtual cable
Mabhurawuza maviri: Semuyenzaniso, Google Chrome neOpera (Unofanirwa kusarudza iwo mabhurawuza anogona kushanda nechatroulette)
Paunoisa virtual obs kamera, zvakakosha kuisa 4 kamera (kunyangwe 2 chete ichadikanwa) 2 mamwe makamera anogona kuuya anobatsira kune chimwe chikonzero.
Maererano nemitemo yeChatroulette, zvinorambidzwa zvachose kushandisa webcam emulators, uye Chatroulette inorwisana neizvi, kusanganisira kurambidzwa kweakaunti (Chenjerera), asi isu tiri vanyengeri, handizvo?isu tinofanirwa kuve neshuwa kuti yedu chaiyo kamera inozivikanwa seye chaiyo yemuviri, isu tichaita madiki madiki newe mune registry edhita.
Saka, kuti uvhure iyi registry editor (regedit) unoda kodzero dzemutungamiri wehurongwa, kana zvisina kudaro shanduko dzakaitwa hadzizoiti nenzira ipi zvayo kunyange mushure mokutangazve kombiyuta.
Isu tinopinda mupepeti registry: Pamwe mabhatani eWin + R anovhura hwindo ratinonyora regedit nekuita, kana kunyange nyore mundima yekutsvaga (tsvaga zvirongwa nemafaira), ingonyora regedit uye tinya pane nzira pfupi.
Mune registry edhita: Isu tinofanirwa kuwana OBS - Virtual (unogona kudzima maforodha ese kana kushandura zita rawo, semuenzaniso, kuMycamera) Tevere, isu tinofanirwa kuwana yedu OBS kamera 1/2/3/4 mune registry edhita uye shandura zita ravo kune redu, semuenzaniso OLDcamera1 nezvimwe.Zvakakosha chaizvo kuziva zvauri kuita!kana zvisina kudaro iwe unogona kukanganisa kukanganisa registry zvinyorwa uye unofanirwa kuisazve makamera edu.
Kana iwe wakaita zvese nemazvo, ipapo mushure mekutangazve chatroulette mubrowser, pazasi pachava nesarudzo yemakamera edu nemakrofoni.Kana mubrowser iwe wakapa mukana kune kamera nemakrofoni.
Kana mushure mekunyengera kwese iwe usina chaiyo kamera mu chatroulette, saka iwe uri kuita chimwe chinhu chakaipa: chemuviri, saka nenzira dzose inofanira kubviswa kubva ipapo!Chinhu ndechekuti chatroulette (hongu, usashamiswe) ine algorithm yekusarudzwa kwekamera ine yakakosha, ndiko kuti, yako chaiyo webcam ine yakanyanya kukoshesa mu chatroulette uye saka haifanirwe kunge iri mubrowser.
Zvakakosha!iwe unofanirwa kupinda muChatroulette pasi peakaundi akasiyana: Mabhurawuza esehaafanire kupindirana
Kuti udzivise zvikanganiso: Chatroulette yakavhurika mune rimwe hwindo / bhurawuza, uye isu tinoda mabhurawuza maviri nemaakaundi maviri (vk/fb)
Kana iwe usina account kana usingadi kuwana kurambidzwa kweiyo huru, saka ini ndinokupa zanokutenga nhamba, kutenga nhamba, uye kugadzira maviri fakes - izvi zvinofanirwa!mvumo pane chatroulette chete kuburikidza neVKontakte kana Facebook
Zvakanaka, zvinoita sekunge nhanho dzakaoma dzapfuura:Yave nguva yekumisikidza mabhurawuza edu, yekufamba-famba mu chatroulette: Vhura obs yedu uye gadzira chiitiko chebrowser yekutanga muchikamu chechiitiko (ngatipe zita rekutanga browser, semuenzaniso. , ipapo muchikamu chechiitiko, tinya pane yakagadzirwa chiitiko - > mafirita -> virtual kamera -> sarudza yekutanga kamera, uye usakanganwa kudzvanya tanga! Zvikasadaro, mubrowser yekutanga mune chat roulette pane yekutanga kamera. hapazovi nechinhu kunze kwehwindo rekutanga reiyo chat roulette pachayo.
Shevedza makamera ari mumasefa nemazita avo chaiwokuti usavhiringike kuti chii uye kupi: Semuyenzaniso(Virtual kamera 1 chrome)iko zvino muhwindo rekutanga rekutanga rakatanga OBS iwe unofanirwa kusarudza hwindo rekutora (tichatora hwindo 1). yebrowser yedu ine yedu chat roulette.
Mamwe ma tabo anofanira kuvharwa kuitira kuti yakawandisa isasvike pamhepo.Mushure mekumisa masosi nemakamera, vhura iyo chat roulette (Log in neVK / FB account) sarudza yedu yekutanga kamera mune yekutaura roulette hwindo - sezvayakatangwa mune yedu yekutanga OBS Ngatitarisei zvatakawana.
Izvo zvinodikanwa kubata hwindo nechat-roulette!mamwe ma tabo anogona kugadzirwa kana asina kuvharwa
Iye zvino mune yekutanga obs muhwindo rezvinyorwa, isu tinofanirwa kudyara (goho) kuitira kuti mubrowser yedu yekutanga ine kamera yekutanga yakavhurwa, pane imwe chete grey chat-roulette sikweya isina zvinodzora.Pano iwe unofanirwa kuchenjerera uye kuve nechokwadi kuti hapana mitsetse yakasviba yakabuda, zvikasadaro prank yedu ichapisa.
Pano, ese ega ega kucheka marongero anoenderana nekuti chaizvo iwe unoisa sei mabhurawuza maviri kune mumwe nemumwe.
Iye zvino tinoona mufananidzo wedu nemazvo!inofanira kunyatsotambanudzwa, asi kwete nehuremu hwechirongwa cheOBS, asi kuti tisarare nekamera iyi, ndiko kuti, kuitira kuti chat roulette ive negrey sikweya isina mbariro nhema dzakatenderedza kumucheto.
Zvakare muzvirongwa paunenge uchicheka -> unofanirwa kuita shanduko -> flip horizontal kana ukasazviita, pachave nerumwe rudzi rwekuita girazi uye izvi zvinotipa 100%
Kana iwe wakaita sezvandiri kukunyorera pano: Ipapo iwe unofanirwa kuwana chimwe chinhu senge pane yangu skrini.
Lifehack kana uchitambanudza mufananidzo muobs, kana iwe wakabataShiftbhatani ,wobva watambanudza zvishoma zvirinani, uye nekubata alt uye kutambanudza, iwe unodyara furemu pasina kutambanudza mufananidzo.Nehunyengeri uhwu, unogona kuedza kubvisa zvakawandisa kubva pafuremu.Zvakare, chenjerera paunenge uchitambanudza, edza kuita kuti zvive nyore kuitira kuti munhu ari mumapuranga asanyanya kunyungudutswa uye asina kunyanya kutambanudza, sezvakaita, iyo yegoridhe inoreva.
CHINHU CHINOKOSHA!mune ese ari maviri, isu tinodawo kumisa imwe sosi, ingave yako chaiyo webcam kana vhidhiyo, kana imwe mhando yekuridza mhere uye kuseta chiitiko switch kuti zviitike ipapo.
Isu tinofanirwa kudzokorora nhanho dzakafanana mubrowser yechipiri uye mune yechipiri obs seyekutanga, chete nekusarudza yechipiri obs kamera yatove muchiitiko.Nekudaro, isu tinowana relaying yevanopindirana!Ndiani achafunga kuti vakarova munhu netsaona, asi chokwadi iwe unodzora switching yevanopindirana.Zvakavanzika zvakadaro :)
Zvinoita sekuti takatoita zvese, asi pane imwe hombe asi!vanopindirana vedu havazonzwanana, uye nekuda kwezvinangwa izvi tinoda zvirongwa zvakadai se: Voice mita VoiceMeeter uye VoiceMeeter Virtual Cable pasina mapurogiramu aya, vatauriri vedu havazonzwanana chero ipi zvayo.
Dhawunirodha uye isa zvirongwa zvedu, vape mukana: uye enderera kune zvinonzwika marongero.Izvo zvinodikanwa kuti tisarudze maikorofoni yedu muchikamu chimwe(kuitira kuti tigone kupindira chero nguva muhurukuro)Usakanganwa kubatidza izwi miter inopinza mune inonzwika control panel, zvikasadaro kunyangwe mushure mezvirongwa ruzha harushande.
Isu tinovhura iyo Voicemeeter chirongwa cheiyo maikorofoni: mune yekutanga parameter tinoisa maikorofoni yedu, uye yechipiri muA1 - vatauri vako muA2 - KS: VB-audio Point, ndizvo zvese zvinonzwika zvinofanirwa kushanda kune ese maviri interlocutors kusanganisira iwe.
Zvinhu zvidiki: Sezvandanyora pamusoro, iwe unofanirwa kugadzirira chimwe chiitiko apo yako chaiyo webcam ichave yakavhurika kana chimwe chinhu, semuenzaniso, munhu anoridza mhere, chenjera - vanopopota nekuti havasi vanhu vese vane moyo wakasimba.
Usakanganwa kuisawo chiitiko ichichinjira kune hotkeys kuitira kuti vanhu vedu vasingatarisirwi vasava nekupokana kuti iyi ndeimwe yemhando yekusaziva :) Kugadziriswa kunoitwa mune hotkeys.
Chatroulette ye Android
Chatroulettemaneja wemahara wekusangana online nevasingazive uye shamwari.Hazvidi kunyoreswa, mushure mekuiswa, iwe unogona ipapo kubatana kune interlocutor.
Vhidhiyo chat roulette yakawana mukurumbira wayo sevaraidzo, asi sevhisi ndeyekushamwaridzana mune zvakasikwa.Vese maRussia uye vagari vakaenda kunze kwenyika nguva nenguva vanouya pano kuzotsvaga mweya wekuroora, saka chat roulette inoshanyirwa nevanhu vanopfuura zviuru mazana maviri zuva nezuva uye nhamba dziri kuramba dzichikura.
Chatruletka yeAroid inowanzosazivikanwa kutaurirana nevanhu vausingazo sangana navo muhupenyu chaihwo.Iyi nzira hairemedzi vashandisi nechinhu chero chipi zvacho uye haiisi chero zvisungo.
Chatroulette app maficha:
nyika dzose dzepasi;
vanhu vakawanda vanofarira;
Kune basa rakazara, zvinodikanwa kupa iyo application kuwana kune yakakumbirwa data.Pasi pehwindo revhidhiyo pane chinyorwa chekutaura, kureva kuti, haugone kutaura chete pamakrofoni, asiwo unopindirana neinterlocutor.Windows inogona kuchinjwa uye kudzokororwa.
Iyo yakakurumbira Chatroulette sevhisi yakanakira nekuda kwekusazivikanwa, kana uchida, unogona kushandura nyika yekugara uye dunhu rekutsvaga.Chero ani zvake anogona kunzwa akasununguka mukutaura.Zvinogara zvichinakidza kupedza nguva pano.
Kuti ufarire vashandisi, unogona kuuya nemufananidzo wakajeka kana kungogovana hobby yako nevamwe, vamwe vanofarira kuronga matambiro kana mabiko epamhepo ane ruzha.
Chatroulette yeAroid inzvimbo yaunogona kungozorora uye kuva nenguva yakanaka, tsvaga mweya wako wekuroorana naye, kana kunyange mweya wekuroorana naye.Chishandiso chinogona kushandiswa chete nevana vane mvumo yevabereki, kana kuburikidza nekutonga kwevabereki.
Kuti uiseChatruletkaunofanirwa kudhawunirodhaiyi application
Unogona kudhawunirodha Chat Roulette yeAroidyemahara muRussia pazasi kuburikidza yakananga link.